Home > Travel Europe > Eoropa ny tsy maintsy Jereo ny toeram-pivavahana
ny Abi Proud
Business Travel ny Train, Fiaran-dalamby any Italia, Fiaran-dalamby Spain, Torohevitra toro-lalana amin'ny lamasinina, Fiaran-dalamby Turkey, Travel Europe
(Last Nohavaozina: 01/08/2021)
Eoropa dia an-trano any amin'ny iray nahay ny tantara sy ara-kolontsaina mahatalanjona trano, ny ankamaroany izay azony amin'ny alalan'ny be ny kaontinanta ny fanangonana ny toeram-pivavahana. Izany no mahatonga ny amin'izao fotoana izao, dia efa boribory ny 3 fa mandinika ny maha-tanteraka tsy maintsy mahita, manarona izao tontolo izao-malaza trano manerana an'i Eoropa ny sasany indrindra tanàna malaza.
1. St Petera Basilica, Vatican City
Any ao anatin'ny rindrin'ny ny firenena kely indrindra eran-tany, Vatican City, St Petera Basilica no Azo antoka fa iray amin'ireo lehibe indrindra sivilizasiona lalitra ny maritrano sy ny zavakanto. Ary ny lehibe attraction sary 10 mpitsidika tapitrisa isan-taona, ity rafitra mahavariana overlooks St Petera Square sy mirehareha ho manan-tantara nanankarena fitambaran'ny kanto, tsanganana marbra, ary dome misy sary an-tsary mosaic nilahatra noforonin'i Michelangelo (izay afaka mianika eo an-tampon'i, tokony sahy handray ny 491 dingana an-dalana!).
Na dia toy izany ity toerana malaza amin'ny mpizaha tany, mbola ny akanjo fehezan-dalàna hentitra ampiharina mba ho fantatry ny alohan'ny nitsidika. Tsy maintsy manao pataloha lava (izay midika hoe tsy misy kilaoty, na inona na inona ny fomba mafana fa ny masoandro italiana), tamin'ny vehivavy navela manao zipo ela kokoa noho ny lohalika halavan'ny. Sorony dia tsy maintsy koa ny rakotry ny miralenta rehetra amin'ny fotoana rehetra.
St Petera Basilica dia misokatra isan'andro amin'ny 7 am-7pm volana Aprily ka hatramin'ny Septambra, ary 7 am-6pm tamin'ny Oktobra ka hatramin'ny Martsa. Entry dia maimaim-poana (na misy fieken-keloka ho an'ny ticketed saram fizarana, toy ny St Petera bola sy ny St Petera Dome), na izany aza, mahafantatra fa ny filaharam-be dia afaka ny ho ela, noho ny seranam-piaramanidina fomba skanera sy ny fiarovana tsy maintsy handalo voalohany.
2. Sultan Ahmed Mosque (Ny Blue Mosque), Istanbul
Miorina ao Tiorkia namakivaky tanàna, Istanbul, ny Sultan Ahmed Moske dia mahazatra antsoina hoe The Blue Mosque noho ny tsy manam-paharoa manga anatiny. Nanorina ny Ottoman Sultan Ahmed I teo anelanelan'ny 1609 ary 1616, ity rafitra mahavariana miasa toy ny fizahan-tany na ny lehibe sy mavitrika mahasarika toeram-pivavahana, izay midika hoe trano fivavahana dia mikatona ho tsy mpivavaka nandritra ny dimy vavaka isan'andro – ny fotoana fivavahana dia azo zahana eto eo anatrehanao mitsidika.
Misy fehezan-dalàna hentitra akanjo fa mpitsidika rehetra dia tsy maintsy manaraka foana alohan'ny hidirana ao amin'ny trano fivavahana. Voalohany, kiraro dia tsy maintsy nesorina sy namponeninao eny amin'ny harona plastika mazava omen'ny amin'ny trano fivavahana maimaim-poana – ianao dia manana ny safidy mba hamela ny kiraro ao amin'ny cubby lavaka, na hitondra ny kitapo miaraka aminao. Raha tonga ao an-akanjo, olona tokony hifidy ny mifatotra akanjo sy hahazoana antoka ny ranjony dia nanarona, fanalavirana zavatra toy ny akanjo lava sy ny short. Ny vehivavy dia tokony hanao fitafiana mihanjahanja ihany koa eo am-piantohana ny sandriny, tongotra, ary ny volony dia voasarona mihitsy hevitra. Izany dia midika fa ny vehivavy no tokony hisaron-doha, rehefa ao anatiny sy, tahaka ny mety ho hevitra vaovao maro tsy silamo Tandrefana mpitsidika, dia mampiseho mianatra ny fomba tsara ny manao akanjo maotina tena ilaina ity eo anatrehanao mandeha.
Entry dia maimaim-poana (na fanomezana kely mba handray anjara amin'ny ankapobeny fikojakojana ny trano fivoahana dia nampahery eo) ary, indray mandeha ao anatiny, sary amin'ny Flash no navela, izany hoe maimaim-poana ianao mba haka be dia be ny snaps ao amin'ny trano fivavahana ny mahavariana anatiny. mazava ho, tsy lazaina intsony fa, fa rehefa ny Sultan Ahmed Moske mbola mavitrika toeram-pivavahana, Aza adino ny hitoetra ho tony sy manaja ny na ny trano sy ny mpanompony rehetra mandritra ny fitsidihana.
3. Ny Sagrada Familia Basilica, Barcelona
La Sagrada Familia Basilica Nanjary malaza espaniola nanan-tantara, na dia eo aza ny zava-misy ny trano dia mbola dalam-panorenana – na ny asa nanomboka tamin'ny 1882, Izany dia midika hoe tsy antenaina amin'izao fotoana izao mba ho vita mandra- 2026! Na izany aza, izany manontolo manasa-Fiangonana Katolika Romana dia efa ny maritranon'ny sangan'asa, manao azy ho tsy azo lavina tsy maintsy-jereo ny manintona ny mpitsidika avy manerana izao tontolo izao.
Open ny mpivavaka sy ny mpitsidika nanomboka tamin'ny taonjato faha-19, Ny Sagrada Familia Basilica anareo dia mandray 4.5 mpitsidika tapitrisa isan-taona ary miasa ankehitriny ny rafitra fidirana ticketed vokatr'izany – these are available to buy online up to two months before the date of your visit. Ireo tapakila fidirana miasa amin'ny fotoana raikitra ho toy ny fomba hampihenana ny fihoaran'ny isan'ny indray voafonja, na izany aza, indray mandeha ianao ao anatiny ianao afaka handany raha mbola tianao Nankafizinay koa ilay mahavariana anatiny. Dia mampiseho mamela, fara fahakeliny, 2 araka ny tokony ho ora mba handray amin'ny maritranon'ny mahagaga ity. Fa mpitsidika mitady hanatrika ny fotoam-pivavahana, bahoaka no natao tao amin'ny 9 ora maraina isaky ny alahady, ary isaky ny Asabotsy 8 ora alina, maharitra 1 ora ary rehefa natao amin'ny fiteny maro.
La Sagrada Familia Basilica manatanteraka amin'ny fomba ofisialy ny fitsipika akanjo fehezan-dalàna ho an'ny fiangonana Katolika Romana, na izany aza, izany dia tsy mirona ho toy ny ampiharina mafy tahaka ny amin'ny Sultan Ahmed Moske na St Peter ny Basilica. Izany lazaina, fa mbola ny tolo-kevitra ny hanaraka izany fomba fitafy isaky ny azo atao, izany hoe tokony hanaisotra izay headwear eo amin'ny teny, vatana mety manao akanjo ambony izay mandrakotra ny sorony, indray, sy ny kibo, ary manao legwear izay manarona eto ambany ny feny.
Eoropa no an-trano ho an'ny maro toerana tsara tarehy ny fanompoam-pivavahana izay tena encapsulate ny herin 'ny maritrano manan-tsahala sy ny fitaomam-panahy ara-pivavahana. Mba hahitana ireo toerana aloha-tanana, nandeha ny kaontinanta lamasinina sy ny boky Save A Train tsy hamela vato miakatra manerana an'i Eropa sy ny toerana manintona maro.
Tianao ve mba hiraketana ny bilaogy lahatsoratra “3 Eoropa ny tsy maintsy-Jereo ny toeram-pivavahana” tao amin'ny toerana? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome antsika-bola miaraka amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: ny https://iframely.com/embed/https://www.saveatrain.com/blog/europe-places-worship Nyawang- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
Raha te-ho tsara fanahy ny mpampiasa, dia afaka hitarika azy ireo mivantana an-pejy ny rohy ambony na mampiasa ny embed.ly rohy.
Ao amin'ny rohy manaraka ity, dia hahita ny làlana malaza indrindra fiaran-dalamby – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml, ity rohy ity dia ho an'ny teny Anglisy làlana fiantsonana pejy, fa isika ihany koa dia manana https://www.saveatrain.com/tr_routes_sitemap.xml, ary afaka hanova ny tr mba en na de sy ny maro hafa fiteny kevitra tiany.
LaSagradaFamilia moskea Train Travel traveltips vaticancity fanompoam-pivavahana
Mpamorona votoaty aho ary vehivavy Silamo mirehareha amin'ny fotoana malalaka ananako manoratra atiny ary ny manao abaya no asako, hijab sy karazana fitafiana Silamo maotina ho an'ny vehivavy. - Afaka tsindrio eto raha antsoy aho
Toerana mahafinaritra hitsidihana anao amin'ny dia hitanao
Interrailing Tips Fa Traveling Around Eoropa On A Budget
Inona no The Best Vintage Stores In Eoropa
Fiaran-dalamby Frantsa, Fiaran-dalamby Alemana, Fiaran-dalamby Spain, Fiaran-dalamby Switzerland, Train Travel The Netherlands, Travel Europe